downloads 6 137
E Cheetah fighter interception. A Delta nku ugbo elu na-atọ ụtọ iji ofufe. Nnọọ ufọk ufene, ọbụna na ala na-agba. The ụgbọelu e mere ka nso dị ka o kwere nke bụ ezigbo onye. The 2D panel e mere site photos, na-anọchi anya nhazi ji site SAAF. Nke a ngwugwu na-agụnye ihe nlereanya, 2D panel, ụda na VC, ọ na-n'ụzọ zuru ezu animated.
The Atlas Cheetah bụ a South African fighter ugbo elu, mepụtara maka South African Air Force (SAAF) na ugbu a na-ejikwara site na Ecuadorian Air Force (FAE). Ya na nke mbụ wuru dị ka isi nweta nkwalite nke Dassault Mirage III site Atlas Aircraft Corporation (e mesịrị Denel Aviation) nke South Africa (guzosie ike 1965) na South Africa na dabeere na Israel Kfir fighter.  atọ dị iche iche variants e kere , 16 sọrọ-n'oche Cheetah D, 16 otu-n'oche Cheetah e na 38 otu-n'oche Cheetah C. The Cheetah Es e lara ezumike nká na 1992, na Cheetah CS na Cheetah DS na April 2008, a na-dochie anya Saab Gripen. A ole na ole ka na-ejikwara na South Africa dị ka ụgbọ elu ule ụgbọ elu. (Wikipedia)